Foko sy Fiaviana · Mey, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Foko sy Fiaviana · Mey, 2008
Tantara mikasika ny Foko sy Fiaviana tamin'ny Mey, 2008
Afrika Atsimo 29 Mey 2008
Na dia efa lasa andro maromaro aza izay ny nampafana ity raharaha ity dia tsara ihany araka ny fiheverako azy ny mamoaka azy etoana. Nanetsiketsika fatratra ny haino aman-jery ary mazava loatra ny… bolongana ihany koa ny ny herisetra faratampony mianjady amin’ny vahiny any Afrika atsimo. Mpibolongana vitsivitsy ary no lasa saina rah amarina tokoa ny filazan’ny governemanta ireny herisetra ireny ho « fankahalana vahiny » (xenophobe, ary misy ny mitsikera ny haino fampahalalam-baovao ho mampirona loatra ity toe-draharaha ity any amin’izay antony nahatonga ny herisetra.
Palestina : Mamaham-bolongana ho an’i Palestina amin’ny 15 mey
Palestina 14 Mey 2008
Marihina amin’ny 15 mey 2008 ny fahaenimpolo taonan’ny Nakba na fahatsiarovana ny namindrana ny Palestianiana hiala an’Isiraely. Mazava loatra fa ho an’ny Isiraeliana izany dia midika ho fahaenimpolo taonan’ny fahaleovantenany. Ary ho an’ny mpamaham-bolongana kosa dia midika ho Andron’i Palestina ny 15 Mey.
Brezila: Famonoan-jaza ataon'ny fampahalalam-baovao fampisehoana
Amerika Latina 03 Mey 2008
Maty tao anatin’ny toe-javatra tsy dia mazava loatra ny zazavavy iray. Ny rainy sy ny renikeliny avy hatrany no voalohany ahiahian’ny haino aman-jery sy ny hevitry ny olona amin’ny ankapobeny, saingy mbola andalana ny fanadihadiana ofisialy. Mba mety ve ny mampino mponina mahatratra 160 000 000 heloka famonoana ny zanany vavy alohan’ny fivoahan’ny didim-pitsarana amin’ity raharaha ity? Fa inona daholo ny resaka manodidina sy ambadik’ity raharaha ity ? miresaka momba izany ny tontolom-bolongana breziliana.